वाणिज्य बैंकहरुको भाउ कति सस्तो, पीई रेसियोले के भन्छ ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहेको छ । यसैबीच, वाणिज्य बैंकहरुले तेस्रा त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार समग्रमा नाफा लगायत प्रमुख सूचकहरु बढेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी पनि सुधार हुँदै गएको छ । दरियो पुँजी आधार, कडा नियमन लगायतका कारणबाट वाणिज्य बैंकहरुको सेयर लगानी अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै सुरक्षित मानिएको छ । साथै, अहिले कायम मूल्यले पनि तुलनात्मकरुपमा सेयर भाउ निकै सस्तो देखिन्छ ।
अझै केही वाणिज्य बैंकहरुको मूल्य–आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ले सेयर भाउ सस्तो नै रहेको देखाउँछ । यसर्थ, दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहनेका लागि अहिले पनि राम्रो समय रहेको छ । कुनै पनि कम्पनीको पीई रेसियोले सामान्यतयाः १ रुपैयाँ प्रतिफल पाउन कति मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउँछ । पीई रेसियो २० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई निकै सुरक्षित मान्ने चलन छ ।
तर पीई २० भन्दा बढी हुँदैमा जोखिम भइसकेको भन्ने होइन । बुल बजारमा ४० सम्मको पीई रेसियोलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने कपितय विश्लेषकहरुको भनाई छ । २० आसपासको पीई रेसियो त सामान्य हो । तर बजार चरम वियरिस भएको बेला पीई अनुपात १० भन्दा पनि तल आएको देख्न सकिन्छ । अहिलेको बुलिस बजारमा केही वाणिज्य बैंकहरुको पीई रेसियो ४० भन्दा माथि पुगेको पनि देख्न सकिन्छ ।
अन्य क्षेत्र तथा समूहका कम्पनीहरुको तुलनामा अहिले पनि बैंकहरुको पीई रेसियो निकै कम देखिन्छ । पीई (प्राइस अर्निङ )सेयर लगानीको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । तर पीई बढी हुँदैमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन । पीईसँगै अन्य केही सूचकहरु पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सामान्यतयः पीई रेसियो थोरै भएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सिफारिस गरिन्छ । तर पीईलाई मात्र आधार मानेर लगानी गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन ।
पीईसँगै अन्य आधारहरु पनि हुन्छन् भन्ने चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन । कहिलेकाँही लगानीकर्ताहरु न्यून पीई भएका कम्पनीलाई छाडेर धेरै पीइ भएकातर्फ आकर्षित भएका पनि व्यवहारमा भने देखिन्छ । अझ अहिले त पीईजी रेसियो अर्थात प्राइस–अर्निङ–ग्रोथ हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तार हुन थालेको छ । यसले कुनै पनि कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपातका साथमा सम्बद्ध कम्पनी व्यवसाय विस्तारको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
यसबाट भविष्यमा उक्त कम्पनीको व्यवसाय विस्तारको आँकलन गर्न थप सहज हुन्छ । यसैक्रममा हामीले वाणिज्य बैंकहरुको पीई रेसियो कस्तो छ भनेर हेरेका छौं । पछिल्लो तथ्यांक बिहीबार (जेठ २० गते) को सेयर मूल्य (क्लोजिङ प्राइस) लाई आधार मान्दा १० वाणिज्य बैंकको पीइ रेसियो २० भन्दा कम छ । यता, सिभिल र सेन्चुरी बैंकको भने पीई ४० भन्दा माथि छ । हेरौं, कुन बैंकको पीई रेसियो कति छ ?
(नोट : बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेका प्रतिसेयर आम्दानीको आधारमा पीई रेसियो निकालिएको हो ।)
के हो पीई रेसियो ?
लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको समग्र वित्तीय सूचकहरुको राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै, अल्पकालीन होस् या दीर्घकालीन, दुवैथरीका लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण सूचकमध्ये पीइ रेसियो पनि एक हो । कम्पनीको पछिल्लो बजार भाउलाई प्रतिसेयर आम्दानीले भाग गर्दा आउने अनुपात नै पीइ रेसियो हो । पीई रेसियोले कम्पनी ‘अन्डरभ्यालुड’ वा ‘ओभरभ्यालुड’ के हो भन्ने छुट्याउन मद्दत पुर्याउने भएकाले लगानीमा यसलाई महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ ।
सामान्यतयः पीई रेसियो थोरै भएका कम्पनीहरुमा लगानी सुरक्षित मानिन्छ । तर पीइ कम हुँदैमा सधैं सबै कम्पनी राम्रा हुन्छन् भनेर मात्र चाहिँ बुझ्नु हुँदैन । अनि, पीई केही बढी हुँदैनमा त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सधैं सोच्नु हुँदैन । यसमा अन्य केही पक्षहरुको पनि भूमिका रहने गर्छ ।
पीईसँगै अन्य सूचकहरु पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले त पीईसँग कम्पनीको ग्रोथलाई पनि विशेष ख्याल गर्न थालिएको छ । भविष्यको सम्भावनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ पीइ रेसियोको आधारमा तुलना गर्दा एउटै व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु वा एउटै इन्डस्ट्रीका बीचमा मात्र गर्न उचित हुन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपातका केही सीमाहरु पनि रहेका छन् । कम्पनीको कमाई उसको विगतको कमाई हो ।
विगतको कमाईले मात्र सधैं भविष्यको नतिजा ग्यारेन्टी गर्दैन । विगतमा राम्रो कमाएको कम्पनीले भविष्यमा पनि राम्रै गर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यसैगरी, विगतमा राम्रो परफर्मेन्स गर्न नसकेका कम्पनीले पनि भविष्यमा निकै राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । यसर्थ, लगानीकर्ताले यी विषयहरु पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा, तर पीई रेसियो लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण सूचक चाहिँ हो ।